Nabaddoonada Bari oo ka digay cawaaqibka dagaalka Cayn, Somaliland-na ugu baaqay in ay ka baxaan Sool iyo Cayn. – Radio Daljir
Nabaddoonada Bari oo ka digay cawaaqibka dagaalka Cayn, Somaliland-na ugu baaqay in ay ka baxaan Sool iyo Cayn.
Boosaaso, Feb 22 – Shir ay maanta ku yeesheen magaalada Bossaso ayaa nabaddoonada gobolka Bari waxay kaga hadleen dagaaladii dhawaanahan ka socday gobolka Cayn kaasi oo dhexmarayey ciidamada Somaliland iyo dadka deegaanka.
Shirka oo ay ka soo qayb-galeen in ka badan 20 nabaddoon ayaa laga soo saaray war-murtiyeed loogu baaqayo dhinacyada dagaallamaya inay si deg-deg ah dagaalka u joojiyaan una diyaar garoobaan wadahadal si loo baajiyo dhiigga daadanaya. Sidaas oo ay tahayna waxaa Somaliland laga dalbaday inay deg-deg ciidamadeeda ugala baxdo gobolka.
Nabadoon C/qaadir Axmed Xarrago oo hadlay ayaa sheegay in Somaliya ayan maanta u baahnayn dhiig micno darro ku daata maadaama la soo maray 20 sano oo ay socdeen dagaallo sokeeye kuwaas oo laga dhaxlay dhimasho, dhaawac, barakac iyo burbur hantiyeed ayna waajib tahay in dagaalka la joojiyo, laakiin nabaddoonku wuxuu intaasi raaciyay in Somaliland looga fadhiyo inay ciidankeeda kala baxdo goobaha ay haysto ee ka tirsan gobollada Cayn iyo Sool.
Nabaddoon Maxamed Warsame oo isna ka mid ahaa nabaddoonadii goobta ka hadlay ayaa maamulka Somaliland ku eedeeyey inay ku soo duuleen gobalka Cayn si ay u qabsadaan ayna lama huraan tahay inay ka baxaan goobaha ay qabsadeen.
Dagaalka Kalshaale waxaa ku dhintay in ka badan 40 qof mudadii uu socday wuxuuna xiisad ka dhex abuuray Puntland iyo Somaliland waxaana hadda jirta daganaan yar inkastoo mar kasta la filankaro dagaal dib u qarxa maadaama ay labada dhinac wali is hor fadhiyaan.